Sidoo kale Ben de la Creme dhab ahaantii guriga ayuu tagaa todobaadkan? - Dukaamada eGay
Dhamaan cayaaraha isbedelka waxaan ku aragnaa iyada oo ku dadaaleysa inay hore u soo qaadato bacda mar kale iyo sidoo kale dib-u-daabacidda ka dhanka ah Trixie ee caqabada sameynta samaynta, iyo guuleysta.
Intii lagu guda jiray dooddeeda waxa ay ka hadleysaa niyadjabkeeda iyo sida tartanku u culus yahay cadaadis aad u badan oo ay ku hayso xakamaynta iyo kufsashada qaddarinta, halkii laga tirtiri lahaa Aja sida doorashadeeda ku dhegto, waxay go'aansataa inay ka soo baxdo isla'egta, iyo "Sashay's away".
Iskuday iyo aan loo baahnayn sida aan u maleyno inaynu wada ognahay inay tagi laheyd oo dhan marxaladdaanna waa faraskii ugu fiicnaa ee lagu guulaysto. Maxay sababta ay u wada hadli kari waayeen oo ay uga gudubtay xariiqda dhamaadka? Taageeradeeda waa la niyad jabayaa. Bye Ben de la. x
waa maxay isotretinoin loo isticmaalo